China Rainbow Nail Drill Bits Set Diamond fekitari uye bhizimisi | Yaqin
Nyanzvi Chipikiri Drill Bits Set
Sanganisira 30pcs muraraungu wedhaimani carbide bits. Iyi kit inosanganisira inosanganisira zvese zvipikiri zvibhokisi maturusi aungangoda kune ezvipikiri art. Inokodzera nyanzvi manicurist kana chipikiri art vatangi.
30pcs Daimondi Carbide Drill Bits
Aya mabheji ekuchengetedza kwembambo yezvipikiri akatetepa kusvika kune yakavharirwa nzvimbo iyo inogona kubatsira mabheti kuti apinde munzvimbo dzakasimba dzezvipikiri. Inyore kushandisa, ganda-rinodzivirira, rakanakira nzara yekuisa zvinowedzera uye nekuchenesa iyo cuticle nzvimbo, mativi emadziro. Daimondi carbide zvinhu hazvisi zvekungodzivirira chete asi zvakare zvinogona kudzivirira kubva pakupisa kwekukuvara nekupisa kupisa.Pane zvakaomarara grits, yepakati grit uye yakanaka grit. Zvimedu makumi matatu zvipikiri zvipikiri zvekuboora mamodheru anogona kuchinjika kune akasiyana masimba kuti aite akasiyana nyanzvi nyanzvi zvipikiri mabasa. Zvakadai sekurodza, kukuya, kuchenesa, kuveza, kutsetseka, kupolisha, uye kugadzirisa zvakare gel uye acrylic mbambo nekukurumidza zvakanyanya.
30PCS dzakasiyana nzara dzekuboora mabhendi, wepasirese 3/32 "(2.35mm) saizi simbi isina simbi shank, inokodzera michina yemagetsi yakawanda yemachira anoshandisa 3/32" bits. Inogadzikana kwenguva yakareba yekushandisa, yakakodzera chipikiri salon, yekunakirwa imba, spa kana wega manicure pedicure, DIY chipikiri art kumba.
Chipikiri chibooreso matomu ane ngura inodzivirira, pamwe nekusavhara kwembambo. Chipikiri bhurasho zvishoma zvinogona kuchenesa guruva pazvidimbu kana zvipikiri, chengetedza mabiti mushure mekushandisa kwega kwega, chengetedza iwe nezvipikiri zvako zvine hutano.
Yakasimba yedhaimani zvinhu izvo zvinogona kumira kusvika pakakora uye zvakaomarara nzara pasina kutyora. Nyore kubvisa rakawandisa kana rakafa ganda uye kumenya uye kuumba zvipikiri. Chang yako yemhizha chipikiri basa, iwe unogona DIY mbambo art kumba.
Yakagadzirwa yemhando yepamusoro uye yakaoma-yakapfeka daimond, ine ngura kuramba uye kusimba. Dhizaini yakasarudzika ndeyehunyanzvi kuti iwe uite yako mbambo nyowani uye inodzivirira ganda rako kubva kukuvara.
Saizi inotsikika nyore kutakura newe chero kupi. Yakakunakira uye inoshanda kwauri kuti uite yako chipikiri mifananidzo, kuchengetedza nguva yako. Idzi nzara dzekuboora maturusi maturusi anogona kubhowa nekutsvedza nzara yako, kukuya chimiro uye kubvisa gel nzara kana ganda rakafa.
Pashure: Manicure Chishandiso Drill Bit Nail Set Wholesale
Zvadaro: OEM ODM Drill Nail Machine 35000rpm
Rainbow Nail Drill Bits Seta